Ahmiyada ay leedahay 26 June iyo sida loo xusay Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ahmiyada ay leedahay 26 June iyo sida loo xusay Iyadoo maanta ay ku beegan tahay 26 June oo ah markii gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya ay ka xuroobeen gumaystihii Ingiriiska islamarkaana ah markii u horaysay oo ciida Soomaaliya laga suro Calankeena ayaa waxaa dabaal dagyo farxadeed oo lagu xusayo gobonimada ay ka socdaan qeybo badan oo dalka Soomaali ah.
Meelaha laga xusay munaasabadaha loogu dabaal dagayo 26-ka June ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Maamulka Somaliland oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysa oo dadka ku dhaqan ay fagaarayaasha isugu soo baxeen iyaga oo muujinaya sida ay ugu faraxsan yihiin xuska maalintaan qiimaha badan, waxaana ka hadlay Madaxda Somaliland.
Sidoo kale qeybo ka mid ah gobolada Koofurta, bartamaha dalka iyo gobolada Waqooyi bari ayaa ka mid ah meelaha munaasabada loogu dabaal dagayo, waxaana Madaxda Galmudug oo ka hadlay maalintaani ay sheegeen in ay tahay wax lagu farxo, iyaga oo soo dhaweeyay wada hadalada u dhaxeeya dowladda iyo Somaliland sheegeyna in aysan kala goin Umada Soomaaliyeed.
C/qaadir Macalin Maxed Geedi oo ah Aqoonyahaan Soomaaliyeed oo la hadlay Warlalis ayaa waxa uu sheegay in ahmiyad weyn ay u leedahay Umada Soomaaliyeed 26-ka June oo uu sheegay in halgan fara badan loo soo maray ugu dambeyntiina lagu guulaystay.
Aqoonyahaankaani oo waayo joog u ahaa marxaladaha dalka ayaa waxa uu sheegay in xereynta dalka kadib ay xuroobeen dowlado badan oo Afrikaan ah oo ku deyday Soomaaliya, waxaana uu sheegay in halgankaasi ay kaalin weyn ka qaateen Ururadii SYL iyo SNL.
Waqooyiga Soomaaliya ayaa bishii June ee 1960-kii oo ay kasoo wareegatay 52 sano ka xuroobay gumaystihii Ingiriiska, waxaana xuska maanta uu kusoo aadayaa xili ay kala maqan yihiin Koofurta iyo Waqooyiga Soomaaliya inkastoo hada uu wada hadalo ay u socdaan.